Daacadnimada macaamilka ee warbaahinta bulshada
Tallaabo tallaabooyin ah oo kor u qaadaya daacadnimada macaamiisha ee warbaahinta bulshada
Warbaahinta Bulshadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa sameynta xiriiro macno leh oo la leh cutomers, si ay weligood kula joogaan.
Dhisidda Xiriirka Real
Fure u ah macaamiisha daacad ah ayaa ka dhigaya xiriirka labada dhinac midba midka kale faa'iido leh - bixiya oo qaato.
Waa habka ugu fiican ee lagu dhisi karo daacadnimada macmiilka iyo isla markiiba.
Dhegeyso oo la macaamilaan dhagaystayaasha
Haddii aad macaamiishaada ku qiimeeyso inta ay la macaamilaan warbaahinta bulshada iyadoo lagu saleynayo danahooda ugu dambeysa
Kaqeybgalka tooska ah
Warbaahinta Bulshadu waxay ku magacawday farriin fariin u dirtay taageerayaashooda iyo taageerayaashooda. Si loo kordhiyo daacadnimada macaamiisha ma aha oo kaliya inay soo bandhigaan jawaab celinta.
Ka dhexgal u doodahaaga firfircooni
Macaamiisha qaan-gaarka ah ayaa ka mid ah hantida ugu qiimaha badan ganacsiga. Waxaad u baahan tahay inaad si joogta ah ula shaqeyso doodahaaga ugu daacadsan si ay u sii wadaan taageeradaada.
Dib ula wadaag waxyaabaha ugu fiican
Si aad ugu guulaysato dareenka "dhagaystayaasha cusub" ee shabakada warbaahinta bulshada waa inaad wadaagto waxyaabaha ugu fiican. Waxyaabaha ugu fiican ayaa ah kuwa hela wada shaqeynta ugu sareysa iyo jawaabaha wanaagsan ee laga helo dhagaystayaashaada.
Shirkadda 'Dabagalka Dabeecadda' Shirkaddaada
Calaamadaha ayaa ogsoon in macaamiishu ay noqdaan kuwo aad waxtar u leh inay kula yeeshaan ganacsi markaad bilawdid inaad la xiriirto heerar shakhsi ahaaneed.
U bandhig Barnaamij Barnaamijka Abaalmarinta
Waxaa muhiim ah in la abuuro lana ilaaliyo laxiriir joogto ah. Waxaad dooneysaa inaad hubiso qiimaha aad bixiso waa kuwa loo arkay inay yihiin ganacsi caddaalad ah oo macaamiishaada ah 'daacadnimo joogto ah.
Ku soo biir Kumbuyuutarka Suuq-geynta si aad u dhisto Xirfadlahaaga Diiwaan-gelinta Dijitaalka ah ama kugu kobciya boobka.